Chọọchị Ọtọdọks nke Russia - WRSP
OZI OZI OZI OZI RUSSIAN
1589: A hoputara Iov onye bubu Onyeisi nke Moscow.
1654: Onye isi ụka Nikon mmezigharị ụka ya na Schism mere.
1666-1667: Nnukwu Council Council mere ka usoro ochie ahụ dị.
1686: Obodo ukwu nke Kiev sonyeere Moscow Patriarchate.
1700–1917: Nzukọ nke Synodal mere.
1811: E webatara Chọọchị Ọtọdọks nke Georgia na Chọọchị Russia dị ka Exarchate.
1917: E weghachiri Patriarchate ahụ.
1918-1939: Ọchịchị Soviet nke na-ekweghị na Chineke kpagburu ụka ahụ.
1921: E hibere Chọọchị Ọtọdọks nke Russia na mpụga Russia.
1922-1946: Ndi Renovationist na chọọchị mere.
1927: Metodolist Sergii dere Synodal Epistle (“Nkwupụta nke iguzosi Ike n’ihe”).
1939-1941: Parishes na ókèala ọhụrụ ahụ laghachiri na Moscow Patriarchate.
1943: Metropolitan Sergii bụ onye ọchịchị.
1943-1948: Chọọchị Ọtọdọks nke Russia nabatara ụka Georgia na nke Polish autocephalous.
1945: Aleksii I (Simanskii) ka arụnyere dịka Onyeisi.
1956: Ejiri Chọọchị Ọtọdọks nke China kwadoro dị ka akụkụ nke ROC.
1958-1961: "Mkpagbu Khrushchev" mere.
1961: ROC sonyeere World Council of Churches.
1971: Ndị Council Council họpụtara Patriarch Pimen (Izvekov) wee de-anathematized Old Rite.
1970-1971: Ejiri chọọchị ndị kwụ ọtọ na America na Japan dị ka akụkụ nke ROC.
1988: Gọọmentị Soviet gbanwere otú o si ele chọọchị anya.
1990: Aleksii II (Ridiger) hoputara Onye isi ala.
1989-1992: churcheslọ ụka kwurula na Estonia, Latvia, Moldova na Ukraine, na Belorussian Exarchate ka e kere dị ka akụkụ nke ROC.
2000: Ndị Bishọp 'Council nakweere Iwu ọhụrụ na Ntọala nke Echiche Social.
2007: ROCOR sonyeere ROC.
2009: Kirill (Gundiaev) hoputara Onye isi ala.
2019: parfọdụ ndị parish si Archdiocese nke Constantinople Patriarchate na Western Europe sonyere ROC.
Chọọchị Ọtọdọks nke Russia (ROC) bụ nke ezinaụlọ nke Chọọchị Ọtọdọks nke Ọwụwa Anyanwụ. Ndị Ọtọdọks na-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ onye guzobere ya, mana ụlọ ụka ụka ọ bụla nwere akụkọ ntolite nke ya. Ọ bụ ezie na a nakweere aha Chọọchị Ọtọdọks nke Russia naanị na 1943-1945, akụkọ ihe mere eme ya malitere site na nguzobe nke a eze (autocephalous) Moscow Patriarchate. A na-asọpụrụ Grand Prince Vladimir nke Kiev maka ịkwanye Ọtọdọks Ọtọdọks na Rus 'na 988, ya na nne nne ya bụ Ol'ga kwenyere na e mere ya baptizim na 957. [Foto dị n'aka nri]
Site na nkwado ya e kere Metropolitanate nke Kiev, ọ bụ ezie na ndị Metropolitans mbụ, nke na-abụkarị ndị sitere na Greek, yana Myrrh Nsọ, ka a na-ezigara site na Constantinople. Ozi banyere oge mbụ nke Iso Christianityzọ Kraịst na Russia bụ nkewa na-enweghị ntụkwasị obi. N'ihe dị ka 1300, n'ihi nnukwu akụkụ nke Mongolian, a kpaliri Metropolitan See site na Kiev na Vladimir, na 1325 gaa Moscow (a ka na-akpọ ya "nke Kiev"). Na, 1441, a chụpụrụ Metropolitan Isidor, nke Constantinople họpụtara, na 1439 ọ bịanyerela n'aka ndị Roman Katọlik na Florence Union. Metropolitan ọzọ, Iona, ka kansụl nke kansụl nke ndị bishọp Russia họpụtara na 1448. Ọ bụ onye ikpeazụ ji aha ya bụ "Obodo Kiev." Chọọchị dị na Russia, kwupụtara onwe ya. Na 1589, Onyeisi nke Constantinople mere ka Metropolitan Iov bụrụ Onyeisi nke Moscow; na 1590, ndi isi ndi ozo mara ya ma debanye aha ya na diptychs (ndepụta nke ndi bishọp a ga-eme ncheta n'oge Liturgy) dika aha Onye isi nke ise. Na 1654, Onyeisi Bishọp Nikon malitere ịgbanwe ihe odide na ememe okpukpe; Karịsịa, ọ nyere iwu ịme akara nke obe site na mkpịsị aka atọ karịa abụọ. Okpukpe ochie nke okwukwe schismatic putara na odi rue ugbua.
Na 1700, mgbe Onyeisi Chọọchị nwụsịrị, Peter the Great gbochiri nhọpụta nke onye ga-anọchi ya. Na 1721, Iwu nke Ime Mmụọ malitere ịdị na-egosipụta, na-egosi na Churchlọ Nzukọ Kasị Nsọ na-achịkwa Chọọchị Russia n'okpuru nlekọta nke onye ọrụ gọọmentị a na-akpọ "Chief Procurator." Synod nwere ikike nke ndị nna, mana ọ nọ n'okpuru ndị isi ụwa. N'ezie, Emperor nke Russia ghọrọ onye isi nchịkwa nke ụka (Uspenskii 1998: 177-79, 483). Peter the Great bidokwara uzo mbu nke inata ego nke nzuko nzuko (ala na serfs); ọnụ ọgụgụ ndị ụkọchukwu gbadara agbada, ụfọdụ n'ime ha wedara ala na serfs (Klibanov 1989: 258-59). Iwu siri ike gbochiri ndị mọnk ịhapụ ụlọ obibi ha. Catherine Onye Ukwu gara n'ihu na amụma nzuzo a na 1764.
Ndụ nke ndị ụkọchukwu na nke ọchịchị na Synodal Era enweghị nkewa: mmejọ megidere okwukwe Ọtọdọks nwere ntaramahụhụ mpụ. Otu ugbo n'afọ, onye okwukwe Ọtọdọks ọ bụla ga-eme nkwupụta ma were udo (Fedorov 2003: 152-53). N'otu akụkụ, Alaeze Ukwu chebere ụka. Dịka ọmụmaatụ, a machibidoro ịgbanwe site na Ọtọdọks gaa n'okpukpe ndị ọzọ. N'akụkụ nke ọzọ, chọọchị kwụrụ ụgwọ site na nnwere onwe furu efu. Ekwesịrị ndị ụkọchukwu imebi ihe nzuzo nke nkwupụta ọ bụrụ na mmadụ akpa nkata megide steeti na Emperor (Fedorov 2003: 152). Okpukpe nke onwe, ọkachasị nke ndị gụrụ akwụkwọ, nọ na-emewanye iwu. Na ngwụcha narị afọ nke iri na itoolu na mmalite nke narị afọ nke iri abụọ, enwere ntiwapụ nke mmasị na Ọtọdọks (gụnyere iconography na ụlọ ụka), mana mgbanwe nke 1917 wetara nlọghachi a na njedebe.
Kansụl nke chọọchị Russia, nke emere site na August 1917 ruo Septemba 1918 weghachitere Patriarchate ahụ ma họpụta Onyeisi Ala Tikhon (Belavin). O mekwara ọtụtụ mkpebi banyere ime ka ndụ ụka dị ọhụrụ, mana etinyeghị ha n'ọrụ (Tsypin 1994: 22-26; Fedorov 2003: 302-03). Na Jenụwarị 1918, gọọmentị Soviet dechara usoro nke ijikwa ihe onwunwe nke ụka site na ịchụpụ ya n'ụkpụrụ iwu kpamkpam (amachibidoro inwe ihe onwunwe, iji ndị ọrụ were ọrụ, wdg). Na 1918-1922 gọọmentị bidoro mkpọsa maka ikpughe akụrụngwa site na iji ihe fọdụrụ nke ndị nsọ ma ọ bụ bufee ha na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na-emegide okpukpe. 1922 chere ihu mkpọsa maka ịnara ihe ndị dị oké ọnụ ahịa, gụnyere arịa liturgy, site na chọọchị dị iche iche na-egosi mkpa ọ dị ịlụ ọgụ ụnwụ (Tsypin 1994: 52-53). N'oge a, e jidere ma ọ bụ gbuo ọtụtụ ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị nkịtị.
Ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche na-anọchite anya ndị isi chọọchị nke Moscow na-akụzi ihe na Alaeze Ukwu Russia mbụ. Ulo uka nke Estonia, Poland na Finland kewara, ndi Ochichi nke Constantinople mara ha. Chka ụka dị na Georgia, Ukraine na Byelorussia kwupụtara autocephalies. N'otu oge ahụ, agha obodo gbochiri nkwukọrịta okwu n'etiti bishọp na Onyeisi Bishọp; na Nọvemba 20, 1920 Onye isi ala Tikhon nyere ndị bishọp ikike ikwusa autocephaly nwa oge ọ bụrụ na njikọ ya na etiti agbaji (Shkarovskii 1995: 90). N’ịdabere n’ikike a, ụfọdụ ndị nnọchi anya ụka Russia, bụ ndị bịara mba ọzọ maka ebumnuche dị iche iche, gbakọtara na Nọvemba 1921 n’obodo Serbia nke Sremski Karlovci iguzobe Orthodoxka Ọtọdọks nke Russia n’èzí Russia (ROCOR).
Omume nke oge a dị na chọọchị ahụ, nke gosipụtara n'oge nkwadebe maka Council nke 1917, mere ka ndị otu "Renovationist" dị iche iche, nke gọọmentị Soviet na-akwado n'ihu ọha maka iguzosi ike n'ihe nye ya (Roslof 2002). Na Mee 1922, ndị Renovationists guzobere Churchlọ Ọrụ Ọchịchị Kasị Elu nke bishọp Antonin Granovskii nọ n'isi ya. Ndị nnọchi anya ha weghaara ọchịchị na ndị bishọp niile, na Eprel 29, 1923, kansụl ime obodo Renovationist chụpụrụ Tikhon ma hiwe ụka. ndozigharị (ọ gụnyere ikwe ka alụm di na nwunye nke abụọ, ndị bishọp lụrụ di na nwunye, wdg). Izipu nke okpukperechi nke ulo uka dara; nwa bishọp nwa oge na ndị na-ekwurịta okwu na Onye isi ala Tikhon kewara site na ndị Renovationists (Shkarovskii 1995: 96-97). [Foto dị n'aka nri] Iji mee ka ọdịda ahụ daa, na June 29, 1927 Metropolitan Sergii (Stragorodskii), Locum Tenens mgbe Onyeisi Tikhon nwụsịrị na 1925, kwupụtara na Synodal Epistle ya na ụka ahụ na-eguzosi ike n'ihe nye ọchịchị Soviet (Akty 1994: 509- 513); o nyekwara iwu ikpe ekpere maka ndị isi obodo na ndị agha nke USSR n'oge Liturgy.
Akwụkwọ ozi ahụ mere ka ndị kwere ekwe “na-adịghị echeta ha” pụta, bụ ndị na-ekpeghị ekpere maka ndị ọchịchị na ndị agha, tinyere Sergii na ndị nọchiri ya. A makwaara ha dị ka "obodo catacomb" na "ezi ndị Ọtọdọks Ọtọdọks." Ọ bụghị ụka ọhụrụ, mana ọtụtụ otu dị iche iche, nke nwere ike jikọta ma ọ bụ jigide nnwere onwe (Beglov 2008). “Nkwupụta nke iguzosi ike n’ihe” mekwara ROCOR nke fọdụrụ na ọnọdụ ya na-emegide Soviet na ọchịchị onyeeze nkewa kewapụrụ na Patriarchate Moscow.
Mmekọrịta usoro mmekọrịta nke ụka na steeti na mbenata mmegide mere na 1939-1941, mgbe USSR kwadoro mpaghara mpaghara ọdịda anyanwụ ọhụụ, ebe ndụ ụka na-aga n'ihu. N'oge ahụ, ọdịmma nke Ọchịchị Moscow na ọchịchị Soviet dabara. Site n'enyemaka nke steeti, ebufere parish dị na Baltics, na Western Ukraine na Belarus, na Bessarabia n'okpuru ikike nke Churchka Russia (Shkarovskii 1995: 135-37).
Ozugbo USSR banyere Agha Worldwa nke Abụọ (1941), chọọchị ahụ kwupụtara ọnọdụ ịhụ mba ya n'anya. Na Septemba 4, 1943, n'oge nzukọ ya na Metropolitan Sergii na ndị bishọp abụọ ọzọ, Stalin kwere ka a họpụta Onyeisi Ndị Bishọp. Na Septemba 8, a kpọrọ ọgbakọ ndị Bishọp ka ha kụzie Sergii dị ka Onyeisi Ndị bishọp. Na September 14, e hiwere Kansụl nke Okwu nke Chọọchị Ọtọdọks nke Russia na Sovnarkom (ndị omeiwu) nke USSR. Nke a pụtara na steeti ahụ achọghịzị ikpochapụ ụka kpamkpam. Ngbanwe a na amụma Soviet bụ akụkụ nke atụmatụ steeti iji jiri chọọchị mee ka mmetụta nke ndị mmadụ na-ekpo ọkụ, nke ụfọdụ site na nrụgide nke Allies, nchegbu banyere Iso Christianityzọ Kraịst na Soviet Union, na site na atụmanya nke mgbasawanye ókèala. (Shkarovskii 1995: 211, 218). Iji nyere steeti aka, ụka na oge agha ahụ bidoro isonye na usoro udo mba ụwa na mmemme nke usoro iwu.
N’afọ 1945, e nyere ndị chọọchị ikike ha ga-eruli; e nyeghachikwara ya ụfọdụ ụlọ nke Atọ n'Ime Otu-St.Sergii Lavra na ihe onwunwe nke St Sergii nke Radonezh. Imeghasị iwu megidere okpukperechi nke steeti mere ka nzukọ ụka sie ike. Ndị Renovationist nọ na-ebelata; ka ọ na-erule 1946, ndị ndọrọndọrọ ikpeazụ ya echegharịala ma sonye na ndị isi Chọọchị Moscow. Na March 8-10, 1946, nzukọ ndị ụkọchukwu Katọlik Gris na Lvov tụrụ vootu isonye na Chọọchị Ọtọdọks. Ebe ROC sonyeere na ọrụ mba ụwa ma chọọ ndị ọrụ a zụrụ azụ n'ọrụ, usoro nhazi ya siri sie ike. Na 1946, e guzobere ngalaba Synodal mbụ nke mmekọrịta ndị ụka na mpụga.
Na ọkara nke abụọ nke 1948, mmekọrịta nke ụka na steeti ajụla oyi: steeti kwụsịrị inye ikikere maka imeghe ụka ọhụrụ. Omume a furu efu ma ọ bụ pụta ọzọ ruo 1958, mgbe mwakpo ọhụrụ wakporo ụlọ ụka ahụ malitere, nke yiri ya na ike ya na mkpọsa ndị na-emegide okpukpe nke 1920s-1930s (nke a na-akpọ "mkpagbu Khrushchev") (Chumachenko 2002: Ugwu 168. Nke a pụtara imechi ụlọ obibi ndị mọnk, ụka na seminarị; mmiri mmiri nke saịtị njem njem; mụbara ndị kwere ekwe nkịtị. Na nke mbụ ya na akụkọ ihe mere eme Soviet, gọọmentị nwere ike ịchekwa ọdịiche nke ụka na nchepụta a na-ahụ anya nke ndụ kwa ụbọchị. A na-atụ anya ka ememme ọhụụ ọhụrụ (alụmdi na nwunye, olili ozu, ịnye aha, wdg) iji dochie ememe okpukpe (Zhidkova 2012: 413-14). Mkpuchi emeghe kwụsịrị na 1964 mgbe a chụsịrị Nikita Khrushchev n'ọkwa, ụlọ ụka ahụ gara n'ihu na-arụ ọrụ n'ime steeti kwere ka ọ dị. 1980s gosipụtara ntakịrị mbilite n'ọnwụ nke mmasị ọha na eze na ọdịbendị (nke pụtara, ọdịbendị ime obodo Russia) na nke ime mmụọ (ịchọpụta ihe ndụ pụtara) nke ụka. Itemsfọdụ ihe okpukpe (olu olu, ihe oyiyi) ghọrọ ihe ejiji, ọ bụ ezie na mgbasa ozi Soviet akwadoghị ha.
Omume nke ọchịchị Soviet banyere ụka gbanwere na mberede na 1988, mgbe a na-eme Millennium of the Baptism of Rus 'n'ụzọ iwu. E nyeghachiri chọọchị ahụ ọtụtụ ụlọ ụka akụkọ ihe mere eme, ebe obibi ndị mọnk, na akụrụngwa. Iwu ọhụrụ gbasara nnwere onwe nke ịmara na nzukọ okpukpe, nke a nabatara na October 1, 1990, nyere ụka ahụ iwu zuru oke.
Ochichi onye kwuo uche ya na ọdịda nke USSR nwekwara mmetụta na chọọchị ahụ. Dịka iwu nke 1988 si kwuo, ROC kọwara dịka ụka "ọtụtụ mba" (The Statute 2017); ka oge na-aga, o nyere ndị bishọp nọ na steeti ọhụrụ ndị kwụụrụ onwe ha nnwereonwe zuru oke ma ọ bụ nke ọkara. Nke a egbochighi kpamkpam ikike ọchịchị ọhụrụ. Iji maa atụ, na 2018 Chọọchị Ọtọdọks nke Ukraine kwupụtara ụzọ nke onwe, ndị Constantinople Patriarchate na ụfọdụ ndị ụka-nwanyị ndị ọzọ nabatara ya.
Ozizi nke ROC adịghị iche na nke ndị Chọọchị Ọtọdọks ndị ọzọ. Ha kwenyere na Nicene-Constantinopolitan Creed na ozizi ha nwere ike ị chịkọta ha nkenke dị ka nkwenkwe na Chineke bụ Otu n'ime Ndị Atọ (Nna ahụ, Ọkpara ahụ, na Mmụọ Nsọ); na Ọ ghọrọ mmadụ n’ime ụwa dịka Jizọs Kraịst; nakwa na akpọgidere Ya n’obe ma bilite kwa n’ubọchi nke-atọ. Chọọchị na-ele anya ọdịdị na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst site na iji weghachite onyinyo nke Chineke n'ime ụmụ mmadụ nke na-emeghe ụzọ maka nzọpụta ha (ya bụ, iweghachi oyiyi nke Chineke), ma ọ bụ ịkọwa Chineke (Greek: theosis). A na-atụ anya ndị kwere ekwe ịgbaso ụzọ nke Kraịst; nke a pụtara ịnwụ (n'echiche na ha na-egbu agụụ ha na ebumnuche mmehie ha) na ịkpọlite ​​n'ọnwụ dị ka ụmụ mmadụ ọhụrụ, ndị chiri anya. Chọọchị na-enye ndị Kraịst nkwado n'okporo ụzọ a dị ka nkuzi Ọtọdọks na-emesi mmekọrịta ike, yabụ na ngagharị nke Chineke na onye kwere ekwe n'ebe ibe ha nọ.
Ndị Ọtọdọks kwenyere na ọmụmụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke Jizọs; Nne ya, Onye kacha nsọ Theotokos, bụ mgbe Virgin. Ozizi ahu na akuzi banyere uzo Kraist abua di (nke Chineke na nke madu), nke neme ka Ya buru chi zuru oke na nke zuru oke nke madu. N'adịghị ka Kraịst, ndị Theotokos na ndị nsọ bụ mmadụ efu ndị ruru ogo Chineke. Theotokos dị iche iche n'ihi ịbụ onye nke abụọ na naanị mmadụ, na-agụghị Kraịst, Chineke-Nwoke, onye bilitere n'ọnwụ n'anụ ahụ. Ozu mmadu ndi ozo, dika nkwenye ndi Ochichi ndi Orthodox, ga-ebilite nani maka ikpe ikpe azu. Chọọchị Ọtọdọks enweghị nkọwa sara mbara banyere ihe na-eme ndị nwụrụ anwụ n'etiti. A na-ekwenyekarị na mkpụrụ obi ha na-aga hel ma ọ bụ n'eluigwe (ma ọ bụ na "paseeji" nke eluigwe).
Nkwenkwe na omume nke ROC dabere na ọ bụghị naanị na Akwụkwọ Nsọ, kamakwa na ọdịnala ụka, nke ederede na nke ọnụ. Edeelarị ọtụtụ ederede ọdịnala ede; ndị kwere ekwe gụrụ akwụkwọ na ndị ọkachamara n’okpukpe na-akpọkarị ihe a na-ekwukarị n’okpukpe ha dị ka “ndị Ọtọdọks”, ma ọ bụdị “ọgọ mmụọ” (Sibireva 2006)
Omume na omume nke Chọọchị Ọtọdọks, n'adịghị ka nkuzi, na-enye ohere maka ogo ụfọdụ nke ọdịbendị na ọdịbendị.
ROC nwere emume doro anya dabere na ihu igwe, dị ka Epiphany na-asa ahụ na oghere ice, nke na-enweghị atụ na mba ndị na-ekpo ọkụ (ọ bụ ezie na urcheska niile nwere ụfọdụ ọdịnala ịsa ahụ Epiphany). [Foto dị n'aka nri] practicesfọdụ omume pụtara n'oge oge ịda mba. Ebe ọ bụ na emechiri ụka dị iche iche ma ọ bụrụ na enweghị ike ịnweta, ndị kwere ekwe tụgharịrị gaa na saịtị dị nsọ nke dị mkpa, dị ka isi mmiri (Rock 2012). Kama ijere Chineke ozi, ndị mmadụ gara ebe a na-eli ozu.
ROC, yana ọtụtụ urcheska ndị ọzọ, na-edobe kalenda Old, ma ọ bụ Julian, ụbọchị iri na atọ n'azụ nke Gregorian. Eziokwu a na - eweta ụfọdụ nsogbu kwa ụbọchị, dịka ọmụmaatụ, ụbọchị Afọ Ọhụrụ (otu n’ime ezumike ndị kachasị ewu ewu ma nwee obi ụtọ na mpaghara post-Soviet) dabara na ngwa ngwa ekeresimesi. Ọrụ Chineke nwere ike ịbụ Lenten, Paschal na mgbe niile. A na-akpọ ọrụ Paschal iji gosipụta ọ joyụ nke Mbilite n'Ọnwụ, ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị iche na nke oge. Dịka ọmụmaatụ, enwere mkpụrụedemede Paschal (abụ), a naghị abụ ya, kama ọ na-abụ abụ ukwe. Ọrụ Lenten na tupu Lenten adịghị ka ndị a na-eme mgbe niile: a na-anụ ma na-eme n'oge a naanị ụfọdụ ukwe (dịka ọmụmaatụ, "Site na Mmiri nke Babilọn"), ma ọ bụ emume niile (Na-ewepụ Ihe Nkiri Burial Shroud). O doro anya na ROC na a na-enye ndị nne na mgbede na mgbede, na-eso vespers, ebe a na-eme Liturgy na ụtụtụ na-esote ụbọchị.
Chọọchị dị iche n'etiti emume, nke ndị mmadụ na-eme (dị ka ngọzi nke mkpụrụ osisi ma ọ bụ achịcha Paschal) na ihe omimi, nke Chineke mere. Otutu, ndi Orthodox na-agu ihe omimi asaa: Baptism, Chrismation, Communion (Oriri Nsọ), Penance, Unction, Marriage and Ordination. Oriri Nsọ bụ isi ihe omimi, ebe achịcha na mmanya na-abụ Isi na Ọbara Kraịst. Na ROC, nakwa na chọọchị Ọtọdọks ndị ọzọ, a na-enye ma ndị nkịtị ma ndị ụkọchukwu Ahụ na Ọbara. Na-eri Onyinye Dị Nsọ, ndị kwere ekwe dị n'otu na Chineke na ụka; ọ bụ otu ha ga-esi ruo divinization. Ọ bụ naanị onye nhọpụta nwere akara nke ndịozi ga-eme mmemme Oriri Nsọ. Mysterfọdụ ihe omimi ndị ọzọ nwere ike ịrụ site na ndị nkịtị, gụnyere ụmụ nwanyị (Baptizim).
Ọrụ Chineke na ROC na-abụkarị nke a na-eduzi na Slavonic Church, ọ bụ ezie na a pụkwara iji asụsụ ndị ọzọ mee ihe ma ọ bụrụ na ọgbakọ ahụ abụghị naanị ndị agbụrụ Russia. Slaka Slavonic bụ asụsụ eji arụ ọrụ eji arụ ọrụ; ọ dịbeghị eji ya rụọ ọrụ maka asụsụ obodo. Ọtụtụ okwu Slavonic nke ụka ghọrọ akụkụ nke asụsụ Russian; a na-ejikarị ha abụ uri oge ochie, dịka ọmụmaatụ, nke Aleksandr Pushkin (Bodin 2008). Otu onye na-asụ bekee na-asụ asụsụ Russia, nke na-amụghị Slavonic Church, na-aghọta pacenti iri isii na asatọ nke ihe a gụpụtara n'asụsụ a. Enwere atumatu n’ime uka n’ime nkwado nke igbanwe ya na asusu mm uo nke Russian, mana obu ndi obere ndi kwere ekwe. N'oge ahụ, ịhapụ Slavonic Church ga-abụ ihe siri ike, n'ihi na a na-ahazi ọtụtụ abụ na ekpere ka a gụọ ya dabere n'ụdị egwu dị iche iche (glasy). Ọ gaghị ekwe omume ịmepụta nsụgharị Russian nha aha ha niile. A na-ebukarị, akwụkwọ ekpere na akụkụ akwụkwọ nsọ maka ndị nkịtị bụ Slavonic Church mana eji mkpụrụ akwụkwọ Cyrillic nke oge a. Edere ederede maka ndị ụkọchukwu na mkpụrụedemede Slavonic ochie.
Na Synodal Era ọbụlagodi ndị nwere nsọ nsọ were udo naanị ọtụtụ oge n'afọ (Uspenskii 1998: 184). Mkpakọrịta dị ụkọ kpatara nkwadebe ụbọchị atọ nke metụtara ibu ọnụ na ikpe ekpere sara mbara. Mgbanwe na oriri na-agakarị (kwa izu ma ọ bụ karịa karịa) na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri abụọ, o yikarịrị ka ọ bụ mmegide okpukpe na-emegide, n'ihi na Liturgy ọ bụla gaara abụ onye ikpeazụ. Ugbu a a na-ahụta udo udo nke Synodal Era anabataghị ya, oge nkwadebe ghọrọzighi ihe ọ bụla maka ndị kwere ekwe ndị na-ebi ndu ụkọ ụka na-ebu ọnụ ụbọchị Wenesde na Fraịde ọ bụla. Mkpakọrịta dị ụkọ rụpụtakwara omume nke nkwupụta iwu dị mkpa n'ihu udo ọ bụla na Chọọchị Russia. Ugbu a, a na-ahụkwa ya dịka enweghị isi maka ndị na-aga ụka na-agakarị nwere ndị ndụmọdụ ime mmụọ.
Dị ka ọ dị na Chọọchị Ọtọdọks ndị ọzọ, nduzi ime mmụọ na-enweghị isi dị mkpa na ROC. O doro anya, onye kwere ekwe ọ bụla kwesịrị ịnwe ndụmọdụ (mmụọ), onye ụkọchukwu, onye mọnk, onye nkịtị nwere ahụmahụ (nwanyị nwere ike ịbụ nne ime mmụọ). Naanị ndị ụkọchukwu a họpụtara ahọpụta nwere ikike ịnụ nkwupụta ndị a. Enwere omume nke isoro onye ndụmọdụ na-ekwurịta banyere ndụ ime mmụọ ya na ikwupụta ụkọchukwu ma emechaa. Ọtụtụ ndị kwere ekwe, na-ekwu na ha enweghị ndị ndụmọdụ ime mmụọ. Congregationsfọdụ ọgbakọ na-echekwa omume nkwupụta nke malitere na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu, nke St Joann nke Kronstadt (d. 1908) webatara. N'ime nkwupụta nke otu, onye nkwupụta kpọrọ aha mmehie dị iche iche n'ihu otu ndị nchegharị, a na-atụ anya na onye ọ bụla ga-akwado ime ha.
Na oge nke Synodal ụka bidoro ibipụta Akwụkwọ Ekpere nke nwere usoro ekpere nke ụtụtụ na anyasị maka ndị nkịtị ga-eji na be ha. E nwere otu ihe dị mkpa pan-Ọtọdọks na-abụ abụ mgbe niile (jiri ụdọ ekpere, ma ọ bụ ọla aka) nke obere ekpere nke Jizọs. [Foto dị n'aka nri] A na-atụ anya na ndị kwere ekwe miri emi na omume a nwere ike iru ọnọdụ nke ekpere na-adịghị akwụsị akwụsị nke na-aga n'ihu ọbụlagodi mgbe ha na-ehi ụra. "Ekpere Iwu nke St Seraphim nke Sarov" bụ nke akọwapụtara maka ROC ma na-egosi ibido obere ekpere ugboro atọ n'ụbọchị.
Ememe Ọtọdọks gụnyere inye nsọpụrụ maka Theotokos na nke ndị nsọ. Obodo ọ bụla, bishọp, ma ọ bụ obodo ọ bụla nwere ndị nsọ a mụrụ na mpaghara, ndị na-enye nchebe pụrụ iche nye ndị obodo ha. St Sergii nke Radonezh, onye akpọrọ Hegumen nke Ala Russia, ROC na-asọpụrụ karịsịa. Ọchịchị ndị mmadụ na-esitekarị na nsọpụrụ dị n'okpuru. N'akụkọ ihe mere eme, usoro okpukpe dị iche iche n'aha nke akara ngosi ghọrọ omume ama ama ama ama ama nke Soviet-Soviet, ọ bụ ezie na dịka etiti 1800s ka a hụrụ uru ha dị ka ajụjụ (Freeze 2017: 355). Somezọ ụfọdụ maka usoro ndị a nwere akụkọ ogologo oge (dịka ọmụmaatụ, ụzọ 150 km Velikoretskii na akara ngosi St Nickolas site na obodo Kirov ruo obodo nta ebe a na-ahụ akara ngosi ahụ), ebe ụfọdụ ndị ọzọ dị ọhụụ (iri abụọ na abụọ) Otu kilomita gafere ebe dị nso na Yekaterinburg ebe e gburu ezinụlọ Romanovs Royal na 1918). Ndị njem ala nsọ na-eso otu akara ngosi a na-akwanyere ùgwù nke ukwuu, ma ọ bụ iji na-echeta ihe omume ụfọdụ, na-abụ abụ na ekpere. Usoro ndị a na-eme n'oge a na-egosipụtakarị nri na ụlọikwuu a haziri ahazi, yana enyemaka ahụike nye ndị sonyere (Rock 2014).
Ibu ọnụ na ROC dịgasị iche iche site na izere nri ruo na izere anụ naanị, ebe mmiri ara ehi na àkwá ka kwere. Otutu, obubu onu putara izere ihe nile anumanu. Oriri Nsọ nke Oriri Nsọ tupu udo a na-ewere (opekata mpe awa isii na-enweghị nri na mmiri). Ndị ọzọ ebu ọnụ na Russia na-arụrịta ụka maka ọha na eze Ọtọdọks (Mitrofanova 2018). Ewezuga ibu ọnụ dịgasị iche iche n’afọ ahụ, a na-atụ anya ka ndị kwere ekwe na-ebu ọnụ na Wednesde na Fraịde ọ bụla; ndị ji okpukpe kpọrọ ihe na-ebu ọnụ na Mọnde.
Ndị ụkọchukwu ROC, yana nke Orthodoxka Ọtọdọks ndị ọzọ, nwere ike ịbụ ndị ọcha (ndị lụrụ di na nwunye) ma ọ bụ ndị ojii (ndị mọnk). Ndị ụkọchukwu na-abụghị ndị mọnk bụ ndị ọhụrụ. Ndị ụkọchukwu gụnyere ndị ụkọchukwu (ndị nlekọta) na-eme ihe omimi na ememe; dikọn, ndị na-enyere ndị nchụàjà aka; na ndị bishọp, ndị chiri ndị ụkọchukwu na ndị bishọp ndị ọzọ ihe. Mụ nwanyị enweghị ike ịhọpụta. Na omenaala, ọ bụ sọọsọ ndị isi ojii ka a na-akwalite bishọp; ndị ụkọchukwu lụrụ di na nwunye nwere ike iji mithre chọọ ha mma, nke na-eme ha n'ụzọ ụfọdụ ha na ndị bishọp. A na-ahụta ndị mọnk nkịtị ka ndị nkịtị, mana na ndị mọnk ROC na-ejidekarị ndị ụkọchukwu.
Ndi mọnk n'enweghi ndi nchu aja, tinyere ndi nwanyi, nwere ike gabiga ndi ozo, rassophore ('onye na-ebu uwe'), 'onye na-ebu uwe', na hegumen (m) \_ hegumena (f). [Foto dị n'aka nri] Rassophores na-ada ụda ma na-eyi uwe mwụda ndị mọnk, ma na-enweghị nkwa ha; ndị na-ebu uwe-agha na-ekwe nkwa ndị mọnk; hegumen (a) bụ agadi ndị mọnk nwere ike inye ndị ọzọ nduzi mmụọ. Enwere ike ịbanye n'ime nnukwu atụmatụ (a ga-akpọ onye a schema-monk (nun) ma ọ bụ schema-hegumen). Schema-monastics na-ekwe nkwa siri ike, oge ụfọdụ ha na-ebi ndụ dịpụrụ adịpụ na sket. Otu onye mọnk nwere ike igbanwe aha atọ (dị ka rassophore, dịka onye na-ebu uwe na onye nkata). Enwere ike ịkwalite Monastics na-ejide ndị ụkọchukwu (hieromonks) na Archimandrites. Ọ bụrụ na etinyere na Schema, a ga-akpọ onye a Schema-Archimandrite.
A na-eji usoro ihe owuwu ROC mara domes dị iche iche (mgbe ụfọdụ ọlaedo) domes, zakomars (semicircular vaults nke mpụga mgbidi), wdg. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ ezie na na narị afọ nke iri na itoolu, ụka n'ozuzu hapụrụ ụlọ a na-akwado Classicism na Gothic -revival, ụdị a jikọtara ya na Russia, a na-ewu ụlọ ụka ndị Russia na mba ụwa n'ụzọ dị otú a. A na-amatakwa ime ụlọ nke ụka Russia: akwa iconostasis na-ekewa ebe ịchụàjà site na nave; mgbidi na uko ụlọ na-gbaa agba agba, wdg.
Ihe osise nke Russia na-esokarị usoro nke Ọtọdọks Ọtọdọks zuru oke, ọkachasị ebe ụfọdụ ụzọ mpaghara iji gosipụta ihe oyiyi Chukwu (dịka, dịka ọmụmaatụ, esere isi St. Christopher na isi nkịta ma ọ bụ isi ịnyịnya) amachibidoro. Ihe na-akọwapụta bụ ọtụtụ ihe a na-akpọ akara ngosi Akafisti nke Theotokos, ya bụ ndị dabere n'amaokwu ndị ahọpụtara site na ukwe na nsọpụrụ Ya ("Inexhaustible Chalice," "Ifuru Na-adịghị Ada Ada," "Ọ Joụ nke Ndị Niile Na-eru Uju," wdg). ). A na-enye ụdị ihe oyiyi ahụ nsọpụrụ nke ukwuu nke na ọ bụghị ihe ọhụrụ na Russia ido aha ụka dị iche iche nsọ. Ọtụtụ n’ime ha si na Rọshịa.
Onye isi ndi bishọp nke Moscow na All Rus 'Kirill (Vladimir Mikhailvich Gundiaev) hoputara na 2009. [Foto dị n'aka nri] A mụrụ ya na 1946 na Leningrad; nna ya na nna nna ya bụbu ndị ụkọchukwu. N'azu, Onyeisi bubu onye mbụ nhata; ọ nọ n’okpuru ndị Kansụl nke Obodo na Ndị Bishọp nke Nzukọ-nsọ. N'ezie, a na-ahụkarị ya dị ka onye nwere ikike kachasị ike, na njirimara nke ROC n'ozuzu ya. Dabere na Iwu nke Chọọchị ahụ, okwu ndị kachasị mkpa (dịka ịdị n'otu ụka) bụ ikike nke kansụl Mpaghara, nke bụ otu ndị nnọchi anya nke ndị ụkọchukwu na ndị nkịtị, gụnyere ụmụ nwanyị. Iwu a egosighi usoro a kapịrị ọnụ iji kpọkọta Kansụl Mpaghara. Yabụ, ikike ndị isi ụka niile na-eme site n'aka ndị Bishọp Council, bụ nke Onye Isi Ala na-akpọ oku mgbe niile. N’etiti ndị Bishọp Council, ọ bụ Holy Synod na-achịkwa ụka ahụ, nke mejupụtara oche (Onye isi ụka), ndị isi itoolu na-adịgide adịgide, na ndị otu na-anọ nwa oge. Ndị na-adịgide adịgide bụ ndị a: Metropolitans nke Kiev na All Ukraine, nke St Petersburg na Ladoga, nke Krutitsy na Kolomna, nke Minsk na Slutsk (Exarch nke Belarus), nke Chisinau na All Moldova, nke Astana na Kazakhstan, nke Tashkent na Uzbekistan. Ọ gụnyekwara oche nke Ngalaba Na-ahụ Maka Mmekọrịta Chọọchị Ndị Ọzọ, yana Onye Isi Ọchịchị nke Ndị Isi Chọọchị Moscow. Ebe ọ bụ na kansụl anaghị arụ ọrụ na-adịgide adịgide, Nzukọ Ndị Isi Chọọchị, n'ezie, na-achịkwa ikike dị ukwuu n'ihe omume ụka.
Kemgbe nnabata nke Onyeisi Chọọchị ọnụọgụ nke ngalaba Synodal na ụlọ ụka ndị ọzọ etoola nke ukwuu. Enwere ngalaba maka Mmekọrịta Chọọchị na Society na Mass Media, maka Ozi na Mkpọrọ, maka Monasteries na Monasticism, maka Charity Church na Social Ministry, Patriarchal Council for Culture, maka ctchekwa Ezinụlọ, Nne na Childhoodmụaka, na ozu ndị ọzọ. Na 2008, ndị ụkọchukwu nke ụlọ ụka mere mgbakwunye na mgbakwunye nke nzukọ ụka, na-eleba anya na nkwutọ na nkwụsịtụ nke ndị ụkọchukwu (yana okwu ndị yiri ya). Emepụtara Ngalaba Iwu nke Moscow Patriarchate na 2018 iji dochie Officelọ Ọrụ Iwu nke dị kemgbe 2009. Ngalaba a bụ naanị nzukọ ndị isi nke nwanyị, Hegumena Kseniya Chernega na-achị. Site n’afọ 2011 gawa, ndị isi ụlọ ọrụ synodal dị n’otu n’ime Councillọ Nzukọ Kasị Elu n’ụlọ ọrụ onye isi ụka.
Na 2009, ROC bidoro otu nzukọ pụrụ iche: Inter-Council Presence, nke gụnyere ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị nkịtị, ma kewaa ya na kọmitii iri na atọ (On Theology and Theological Education, On Divine Service and Church Art, na ọrụ ndị ọzọ. ). A na-atụ anya na ọgbakọ ndị otu ọgbakọ ga-atụnye aka na ọgbakọ onye kwuo uche ya nke ndụ ụka. Lọ ọrụ na-akwadebe akwụkwọ dị iche iche nke ụka ga-emecha tụlee na mgbe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ha nabatara nke ọma, ewegara ndị Bishọp Council ma ọ bụ Synod. Presence akwadebela, tinyere ndị ọzọ, akwụkwọ “Ọnọdụ nke Chọọchị Ọtọdọks nke Russia banyere isi okwu gbasara ọmụmụ ihe” nke ndị Bishọp Council nakweere na February 4, 2013. Na mbido afọ 2019, Inter-Council Presence nwere ndị otu 195 : ndị bishọp iri asaa, ndị ụkọchukwu iri asaa na ise, ndị deacon abụọ, ndị mọnk iri na atọ na-enweghị ụkọchukwu, na mmadụ iri atọ na ise.
Bishopric (ma ọ bụ diocese) bụ ngalaba nhazi nchịkwa nke ROC. Na mbido afọ 2019, e nwere bishọp iri atọ na itoolu, 309 karịa ka emechara Onyeisi Chọọchị Kirill. Kesa nnukwu bishop na mpempe akwukwo bu ime ka ndi nzuko nwee ochichi, ma mee ka ndi bishop bia nso na ndi nchuaja na ndi uka. Ewezuga bishọpis, ROC jikọrọ ọtụtụ ụka kwụrụ onwe ha na nke kwụ ọtọ: Ukraine, Chinese, Japanese, Latvian, Moldovan, na Estonian. Bodiestù ndị ọzọ na-achịkwa onwe ha gụnyere Chọọchị Ọtọdọks nke Russia na mpụga Russia, Exarchates na Belarus, Western Europe, na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Metropolitan Areas na Kasakhstan, na Central Asia. Lọ ụka ahụ nwere ụka 182 na ụlọ ofufe, yana ebe obibi ndị mọnk 38,649 (nke 972 bụ ndị conven).
Isi ihe ịma aka dị ugbu a maka ROC bụ na ọ nwere obere ahụmịhe na ịrụ ọrụ na steeti. Na Synodal Era, ụka ahụ nọrọ n'okpuru steeti, na-enwe ọ ,ụ, n'otu oge ahụ, nchebe ya. Ọ bụ onye na-eme omume ọma na onye na-arụ ọrụ na mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze na mmekọrịta akụ na ụba niile. Enweghị oge iji mụta otu esi arụ ọrụ n'adabereghị, ụka, ozugbo mgbanwe ahụ gasịrị, ghọrọ ebe a na-akpagbu ndị okpukpe. Obodo Soviet anọghị na nnọpụiche n'ihe metụtara okpukpe, mana were iwe gosi ya, na-akwalite echiche na emume nke ya. N'oge ahụ, chọọchị mụtara otú e si ebi n'okpuru ala, n'etiti etiti mmegide, ma ọ bụ na-eche ọhụụ ọhụrụ ya. Mkparịta ụka dị n'etiti ụka na ọha mmadụ dị nso na efu, na-agụtaghị ndị pere mpe nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị, n'oge ụfọdụ nke akụkọ ntolite Soviet, mara ikpe n'ezie.
Na mbido 1990s, ụka na steeti gbalịrị iweghachi usoro ụfọdụ nke mmekọrịta mmekọrịta Soviet, mana n'oge na-adịghị anya ọ bịara doo anya na ọhụụ ha dị iche. Obodo ahụ hụrụ ọnọdụ ahụ dị ka mbipụta nke abụọ nke Synodal Era, ọ lere ụka anya dị ka ụlọ ọrụ echiche nke abụọ nke enwere ike iji rụọ ọrụ maka njikọta mba (Knox na Mitrofanova 2014). Chọọchị ahụ, na mmụọ nke Onyeisi Ndị Bishọp Nikon Chetara, chere na ọ bụ ụlọ ọrụ dịka steeti, ma ọ bụ nwee ikike ikpe ikpe ziri ezi n'ihe metụtara steeti na ọha mmadụ. O mechara bụrụ na atụmanya nke ndị eme ihe nkiri abụọ ahụ abụghị eziokwu. Ezigbo mmekọrịta dị n'etiti steeti na chọọchị n'okwu dị iche iche ekpughere na ọdịmma ha dabara adaba ma ọ bụ zute ibe ha (Mitrofanova 2017). Chọọchị ahụ nọgidere na-ahụ mba n'anya ma zere ihu n'ihu ọha na steeti; n'otu oge ahụ, ọ kpughere mkpebi niile nke steeti na-akpaghị aka. Dị ka ihe atụ, Onyeisi Chọọchị Kirill ekwughị okwu iji kwado Crimea ka ọ bụrụ akụkụ nke Russian Federation. Ala ahụ, n'aka nke ya, ajụla mweghachi nke Katidral St Isaac na St Petersburg, kwupụtara nnọpụiche ya n'oge esemokwu metụtara iwu ụka na etiti Yekaterinburg, wepụtara maka mkparịta ụka ọha na eze ụkpụrụ agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọhụrụ nke na-achịkwa ịkụzi Ntọala nke Omenala Ọtọdọks, ma were ọtụtụ usoro ndị ọzọ, nke, ọ bụrụ na atụlee ya ọnụ, na-egosi nsogbu dị n'etiti mmekọrịta ụka na steeti.
Chọọchị na-eche nnukwu ihe ịma aka ihu ugbu a ma ọ bụrụ na ọ ga - abụ onye na - eme ihe nkiri n'obodo (Lunkin 2011; Batanova, Zabaev, Oreshina na Pavliutkina 2018). Ọ ga-adị mkpa ịhapụ catacombs ebe ọ na-adịbu site na amụma steeti na-emegide okpukpe. Mmegide nke ọtụtụ iri afọ mere ka ndị na-ekpe chọọchị Ọtọdọks bụrụ ndị na-adịghị mma na ndị nọ n'okpuru ọchịchị. Ndị ụka ọhụrụ ahụ, bụ ndị bidoro ịbanye na chọọchị ahụ site na njedebe nke 1980s, na-achọ ibi ndụ mmekọrịta nke oge a na-enweghị ike ịbụ akụkụ nke subculture dịpụrụ adịpụ na nke ochie (Mitrofanova 2016). Ọtụtụ n'ime ha kwenyere na enweghị ike mezuo ihe omume chọọchị nke ụka chọrọ na obodo buru ibu (Dịka ọmụmaatụ, onye na-arụ ọrụ n'èzí enweghị ike idebe ngwa ngwa). Chọọchị ga-asọmpi na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke oriri na ntụrụndụ maka oge nke ndị mepere emepe. “Neophytes nke ninties” ugbu a na-enwekarị nkewa site na ndụ nke ụka, ọ bụ ezie na ha na-ahọrọkarị ịnọgide n’okpukpe Ọtọdọks. A hụwokwa ụfọdụ nsogbu nke ndị ụkọchukwu, mgbe ụfọdụ na-eduga n'ịhapụ òtù ndị nchụàjà. Dịka ọmụmaatụ, oke ịda ogbenye nke ọtụtụ ndị ụkọchukwu na-ebutekarị mbibi nke ezinụlọ ha.
Kemgbe afọ 2000, chọọchị edepụtala akwụkwọ iji nye azịza Ọtọdọks n'okwu ndị na-enye nsogbu n'oge a dịka "Ntọala nke Echiche Ndị Ọha;" "Ntọala nke nkuzi banyere ugwu, nnwere onwe, na ikike mmadụ;" "Na ụkpụrụ nke ịhazi ọrụ mmekọrịta ọha na eze;" na “Echiche nke Ọrụ Ozi Ala Ọzọ.” Chọọchị na-etinye aka n'ọtụtụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze. [Foto dị n'aka nri] Dịka ọmụmaatụ, site na 2019, ọ nwere ụlọ ọrụ nsogbu iri isii maka ụmụ nwanyị dị ime na ndị nne nwere ụmụ na ebe iri iteghete na ise maka ndị na-enweghị ebe obibi. Ngalaba na-ahụ maka ọdịmma ndị ụka na Sociallọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọha amalitela usoro mmemme nke aka ya maka ndị otu na-abụghị ndị azụmahịa dị njikere imezu mmekọrịta ha, ọdịnala, agụmakwụkwọ na ọrụ ndị ọzọ na nkwado nke ụka. Ọ bụghị onye ọ bụla nọ na Russia nwere njikere ịnabata ụka a na-arụsi ọrụ ike, nke na-akwado steeti dị ka onye ha na ya hà ma na-ekwu ọtụtụ okwu mmekọrịta ọha na eze dị mkpa. Ozugbo ọdịda nke USSR, chọọchị ahụ nwere "otuto nke ntụkwasị obi" dabere na eziokwu na ọtụtụ ndị amachaghị banyere ya (Furman na Kääriäinen 2001: 13). Na-emekọrịta ihe na ezigbo, ọ bụghị n'echiche, ụka na-akụda mmụọ mgbe ụfọdụ. Ka o sina dị, mgbe afọ iri asaa nke "enweghị" ụka werela nke nta nke nta bụrụ akụkụ mgbe niile, nke a maara nke ọma banyere ọha mmadụ Russia.
Image # 1: Baptism nke Rus 'nke Viktor Vasnetsov dere. Isi Iyi: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Крещение_Руси.jpg.
Image # 2: Onyeisi Tikhon (Belavin) na Metropolitan Sergii (Stragorodskii), 1918. Isi Iyi: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Патриарх_Тихон_и_Митрополит_Сергий.jpg
Image # 3: Epiphany na-asa ahụ na Russia. Isi Iyi: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_550901_Epiphany_celebration_in_Maritime_Territory.jpg.
Image # 4: Ekpere mgbaaka. Isi Iyi: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prayer_rope_-_Bracelet.jpg.
Foto # 5: hegumenas abụọ. Isi Iyi: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Игуменьи_(3237708844).jpg.
Foto # 6: Chọọchị Russia dị na Nice, France. Isi Iyi: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_church_nice_france.JPG.
Image # 7: Onyeisi Kirill. Isi Iyi: https://commons.wikimedia.org/wiki/Patriarch_Kirill_of_Moscow#/media/File:Patriarch_Kirill_of_Moscow.jpg.
Foto # 8: Ntọala ebere "Diaconia" na-ekesa nri ndị na-enweghị ebe obibi. St Petersburg, 2019. Foto nke Anastasia Mitrofanova sere.
Batanova, P., Zabaev, I., Oreshina, DA, Pavliutkina, E. 2018. “Partnerskii prikhod: ”Sotrudnichestvo sviashchennikov i mirian v razvitii sotsial`noi deiatel`nosti v prikhodakh Russkoi pravoslavnoi tserkvi v nachale ХХI veka. Moscow, PSTGU.
Bodin, Per-Arne. 2008. "Asụsụ abụọ na alaeze ukwu atọ: Banyere Nkwupụta na Russian na Slavonic Church na Russia nke Taa." Pp. 57-67 na Site na Orientalism rue Postcoloniality, nke Olofsson, Kerstin deziri. Huddinge: Södertörns högskola.
Bodin, Per-Arne. 2015. "Okpukpe, omenala na ndọrọ ndọrọ ọchịchị akụkụ nke ịsa ahụ n'oge oyi na Russia." Pp. 45-64 n'ime Okpukpe, Ndọrọ Ndọrọ Ọchịchị na Nationlọ Mba na Post-Communist Mba, nke Greg Simons dere, David Westerlund. Farnham: Ashgate.
Chumachenko, Tatiana A. 2002. Chọọchị na Ọchịchị na Soviet Russia: Ọtọdọks nke Russia site na Agha Worldwa nke Abụọ ruo Afọ Khrushchev. Armonk, NY na London: ME pedị.
Fedorov, VA 2003. Russkaya Pravoslavnaya Tserkov i gosudarstvo v synodalnyi oge (1700-1917). Cowoscow: Panorama nke Russkaya.
Ifriizi, Gregory. 2017. “Ot istorii dukhovnogo sosloviya k globalnoi istorii.” Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii 2: 350-64.
Kääriäinen, Kimmo na Furman, Dmitrii. 2001. “Religioznost v Rossii v 90-ye gody.” Pp. 7-48 na Starye tserkvi, novye veruiyushchie: religiya v massovom soznanii postsovetskoi Rossii, nke Kääriäinen, Kimmo na Dmitrii Furman dere. Moscow na St Petersburg: Letnii mwute.
Knox, Zoe na Mitrofanova, Anastasia. 2014. "Chọọchị Ọtọdọks nke Russia." Pp. 38-66 n'ime Okpukpe Ndị Ọwụwa Anyanwụ nke Ọwụwa Anyanwụ na Ọchịchị na Narị Afọ Iri na Abụọ, nke Lucian Leustean dere. London: Ntughari.
Lunkin, Roman. 2011. “Prikhody i monastyri Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi: skrytaia sila rossiiskogo obshchestva.” Pp. 119-40 na Prikhod i obshchina v sovremennom pravoslavii: kornevaia sistema rossiiskoi religioznosti, nke A. Agadjanian dere, K. Russelet. Moscow: Ves`ụl.
Mitrofanova, Anastasia. 2018. «« ibu ọnụ Ọtọdọks na Postsecular Society: Okwu nke Contemporary Russia. » Okpukpe 9. Nweta site na https://www.mdpi.com/2077-1444/9/9/267 na 28 January 2020.
Mitrofanova, Anastasia. 2017. “L’Église orthodoxe russe: mba mba niile?” » Hérodote: Revue de géographie et de géopolitique 166 / 167: 99-114.
Mitrofanova, Anastasia. 2016. “Ortho-media for Ortho-women: in Search of Patterns of Piety.” Pp. 239-60 na Dijitalụ Ọtọdọks na Post-Soviet World: Chọọchị Ọtọdọks nke Russia na Web 2.0, nke Mikhail Suslov dere. Stuttgart: Ibidem.
Nkume, Stella. 2014. "Iwughari Chain: Omenala, Ọga n'ihu, na Usoro nke Cross na Post-Soviet Russia." Pp. 275-301 n'ime Okpukpe Ọtọdọks: Ebumnuche na mgbagwoju anya na Contemporary Russian Orthodoxy, nke Katja Tolstaja dezigharịrị. Leiden, Boston: Ahịa.
Nkume, Stella. 2012. 'Ha gbara osisi pine ahụ ọkụ, mana ebe ahụ ka dị otu' '' njem uka na ala mgbanwe nke Soviet Russia. Pp. 159-89 na Secularism nke State na Ndụ Okpukpe na Soviet Russia na Ukraine, Onye C. Wanner dere. Oxford: Mahadum Oxford University.
Roslof, Edward E. 2002. Ndị ụkọchukwu Red: Renovationism, Russian Orthodoxy, na Revolution, 1905-1946. Bloomington, IN: University of Indiana University.
Sibireva, Olga. 2006. “Sovremennyi sviashchennik m 'narodnoe pravoslavie'.” Pp. 149-77 mu Religioznye praktiki v sovremennoi Rossii, nke K. Russelet na A. Agajanian dere. Moscow: Novoye izdatelstvo.
Shkarovsky, Mikhail. 1995. Okechukwu Pravoslavnaya Tserkov' i Sovetskoye gosudarstvo v 1943-1964 godakh. St. Petersburg: Dean + Adia ‐ M.
Iwu nke Chọọchị Ọtọdọks nke Russia. 2017. Nweta site na https://mospat.ru/en/documents/ustav/ na 28 January 2020.
Uspenskii, Boris. 1998. Tsar 'i Patriarkh: kharizma vlasti v Rossii. Moscow: ụlọ obibi Yazyki russkoi.
Zhidkova, Elena. 2012. «Sovetskaya grazhdanskaya obriadnost´ kak alternativa obryadnosti religioznoi.» Gosudarstvo, religiya, tserkov v Rossii i za rubezhom 30: 408-29.